अन्ततःपालिका अध्यक्ष राईले मुख खोले – ‘विकासदेखि आत्तिएकाहरु बदनामीमा लागे’ - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
अन्ततःपालिका अध्यक्ष राईले मुख खोले – ‘विकासदेखि आत्तिएकाहरु बदनामीमा लागे’
‘पालिका भवन र गाडी खरिद बैधानिक प्रकृयाबाटै’
सुमेरु संबाददाता १६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०४:५९
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पालिकाको मानवीय र भौतिक प्रगती देखेर आरिसे प्रवृत्तिका मानिसहरु सल्बलाउन थालेको बताएका छन् । पालिकालाई बदनाम गरेर ब्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्ने नियतका साथ केही सञ्चार माध्यामहरुमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन भएको भन्दै पालिका अध्यक्ष राईले छोटो समयमानै विकासमा हासिल गरेको प्रगतिलाई देखिनसहनेहरुले रोईलो मच्चाएको बताए ।
पालिका भवन र गाडीको विषयमा केही अनलाईनमा समाचार आए पछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राईले जग्गादाताको मन्जुरीमा आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर नै पालिका भवन निर्माण गरेको भन्दै सेवाप्रवाहका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको विषयलाई गलत मनशायले अतिरन्जित गरेको धारणा राखे । ‘मैले निजिआवास निर्माण गरेको होईन, सेवाप्रवाहका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको’ अध्यक्ष राईले भने, ‘स्थानीय समाजसेवि तथा जग्गादाताबाट जग्गा लिएर नै कार्यालय बनाएका हौँ’ । भवन अभावमा काम गर्न समस्या भएको भन्दै राईले प्रति प्रश्न गरे, ‘टेण्डर खोलेर नै पालिकाको भवन बनाएका हौँ, त्यही कारणले कार्य सम्पादनमा सहज भएको छ, पालिकाको सम्पत्ति जोड्नु भ्रष्टाचार हो ?’ ।
जिल्लाको स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा पहिलो आफ्नै भवन निर्माण गर्ने काम थुलुङदुधकोशीले नै गरेको उनको भनाई छ । यता जग्गादाता एक बहादुर गुरुङका माहिला छोरा बलराम गुरुङले भने परिवारको सल्लाहमै पालिका भवननिर्माणको लागी जग्गा दिएको वताएका छन् । ‘हाम्रो सहमतिमा नै पालिकाको भवन बनाउन जग्गा दिएका हौँ, भवन निर्माण अगाडी नै मन्जुरीनामामा सही गरिदिएका छौँ, सगोलको जग्गा भएकाले अब चाँडै पास गरिदिन्छौँ’ जग्गादाता गुरुङले भने, ‘हामी दिनेलाई आपत्ति छैन, अरुलाई के को टाउको दुखाई ? ’
पालिकाको जग्गादाता सम्मान कार्यक्रममा दोसल्ला ओढ्दै जग्गादाता एकबहादुर गुरुङ । साथमा उनका माहिला छोरा बलराम ।
जग्गादाताले दिएको मन्जुरीनामा
त्यस्तै अस्पताल निर्माणको लागी जग्गा दिएका गोरे राईले आफुले स्वेच्छिक रुपमा जग्गा दिएको भन्दै बदनियतका साथल दुरुत्साहन गर्ने मनसायका साथ समाचार लेखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘गाउँमा अस्पताल बन्नु गौरबको कुरा हो, हामीले सही स्थानमा जग्गा दिएका छौँ तर हुँदै नभएको सिखुखोलाले जग्गा बगाउन लाग्यो भने हाम्रो मानमर्दन गर्ने काम गरियो ’ ।
दुधकोशी सामुदायीक अस्पतालको नाममा जग्गापास भएको धनिपुर्जा ।
यता विना वोलपत्र गाडी खरिद गरिएको भन्ने समाचार प्रति पनि गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारनै सबै सवारी साधनखरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अविलाल राईले वताए । ‘समाचारमा १ करोड १० लाख भनिएको रहेछ, गाडीको बास्तविक मुल्य ८२ लाख मात्र हो’ अधिकृत राईले भने, ‘हामीले पत्रिकामा बोलपत्र आव्हान गरेर नै हाईलक्स भन्दा सस्तो गाडी किनेका हौँ’ । उनले गाडी खरिद सम्बन्धि सम्पुर्ण बिलभरपाई आन्तरिक तथा महालेखा परिक्षकबाट समेत बेरुजु ननिस्की पास भईसकेकाले यस्ता भ्रममा नर्पन आग्रह गरे ।
पालिका अध्यक्ष राईले भने डाँडाँकाँडाको बाटोलाई सुहाउने साधन खरिद गरिएको स्पष्ट पारे । ‘अन्य गाडी भन्दा निकै सस्तो र बलियो छ, मैले मेरो ब्यक्तिगत नाममा खरिद गरेको होईन, उनले भने, ‘मेरो कार्याकाल सकिएपछि अर्को जनप्रतिनिधिले पनि यही नै गाडी प्रयोग गर्ने हो ।’
पालिकाले गाडी खरिदका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्र ।
गाडी विक्रेता कम्पनी जिओ अटो मोबाईलसँगको सम्झौता ।
गाउपालिकाको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न महायज्ञ जस्तो पवित्र कार्य गरेर अस्पताल बनाउने महान अभियान शुरु गरिएको भन्दै अध्यक्ष राईले अस्पताल निर्माणको लागि टेण्डर समेत भईसकेकोले आफ्नै कार्यकालमा अस्पताल बनाई छाड्ने उद्घोष गरे । ‘हल्ला गर्नेहरु गरिरहन्छन, मेरा विरोधीहरु रोगी हुँदा उनीहरुको विमार निको पार्ने अस्पताल दुधकोशी सामुदायीक अस्पतालनै हो’ उनले भने ।
राईहरुको बाहुल्य रहेको स्थानमा महायज्ञ लगाएर जातिय तथा धार्मिक सद्भाव समेत कायम गर्न सफल भएको दाबी गरेको गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको जनाएको छ । सबै काम पारदर्शी रुपमा भएको दाबी गर्ने अध्यक्षले जनताको नाममा आएको एक पैसा पनि हिनामिना नगर्ने बताएका छन् । महायज्ञबाट र अन्यश्रोतबाट संकलित रकमको विद्युतीय अभिलेख राखिएकाले ५ मिनेट भित्र सबै कारोबार जो कोहीले हेर्न सक्ने पालिकाले जनाएको छ ।
अस्पताल निर्माणार्थ महायज्ञ पालिकाको सहजिकरणमा स्वायत्त समिति गठन गरेर आयोजना गरिएको भन्दै अध्यक्ष राईले उक्त समितिको आर्थिक कारोबार महासचिव विमल बस्नेत र कोषाध्यक्ष बलराम गुरुङ सहितको संयुक्त हस्ताक्षरमा हुने स्पष्ट पारे ।
अस्पताल निर्माणको लागि गोरखापत्र दैनिकमा आव्हान गरिएको बोलपत्र ।
सबै काम पारदर्शी रुपमा भएको दाबीगर्ने अध्यक्षले जनताको नाममा आएको एक पैसा पनि हिनामिना नगर्ने जिकिर गरेका छन् । महायज्ञबाट र अन्यश्रोतबाट संकलित रकमको विद्युतीय अभिलेख राखिएकाले ५ मिनेट भित्र सबै कारोबार जो कोहीले हेर्न सक्ने पालिकाले जनाएको छ ।
२ बर्षमा दर्जन बढी कामभएको छ – अध्यक्ष राई
म निर्वाचित भएपछि दर्जनौको विकासका काम भएका छन् । हामीले सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन बनायौँ । पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम गरियो । विकट स्थानमा रहेका वडा र विद्यालयहरुमा ईन्टरनेट जडान गरिएको छ । हरेक विद्यालयमा ई–हाजिरीको ब्यवस्था गरिएको छ । पािलकाले आफ्नै शिक्षा ऐन लागु गरि शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिको काम गरिएको छ । जिल्लामै पहिलो ईन्जिनियरिङ कलेज स्थापना हुँदैछ । सिटिईभिटिबाट सिभिल ईन्जिनियरिङको अनुमति लिईएको छ । अब गाउँमै ढिडो खाएर ईन्जिनियर बन्न पाउँछन् जनताका छोराछोरीले ।
हाम्रो सडक निर्माणमा गुणस्तरीय मापदण्ड लागु गरिएको छ । हामीले खनेका सडकहरु ६ मिटर चौडाईका छन् । विकासको नमुना बनाउने प्रयत्न भईरहेको छ । संघीय सांसद हेमकुमार राई र प्रदेश सांसद उत्तमकुमार बस्नेत समेतको अथकप्रयास र समन्वयमा दुधकोशीमा ३ वटा मोटरेबल पुल र सोलुखोलामा २ वटा मोटरेबल पुलनिर्माणको काम अगाडी बढेको छ भने २५ करोड रुपैँया ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि बजेट छुट्टिएको छ । पालिकाको केन्द्र मुक्लिसम्म सडक पिच हुँदैछ, यो पनि यहाँका लागि ठूलो उपलब्धि हो । नगरपालिका पछि पहिलो पटक गाउँपालिकामा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन लक्ष्मि बैंकको शाखा स्थापना गरिएको छ । पालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सफल भएका छौँ । ठूला जलविद्युत आयोजनालाई जनहितमा उपयोग गर्न अधिकतम समन्वय गरिरहेको छु ।
सबैभन्दा धेरै ऐन तथा कानुन निर्माण गरेर लागु गरिएको छ । खुम्बुपासाङल्हमु पछिको सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउन सफल गाउँपालिकाको रुपमा स्थापित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्कुल नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । मातृ मृत्यूदर शुन्य पार्न आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरि अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेलाई ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिन प्रारम्भ गरिएको छ । मैले निर्वाचित भए देखि नै सबै पक्षसँग अधिकतम सहकार्यको रणनीति लिएको छु । अधिकतम समन्वयका लागि काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई प्रबक्ताको जिम्मेवारी दिईएको छ । सबै वडामा समानुपातिक बजेट वितरण गरिएको छ । अब म कसरी एक पक्षिय भए ? जनहितमा यति धेरै काम भएका छन । मैले गलत नियत राखेको भएयी सबै काम कसरी सम्भव हुन्थे । मलाई गलत प्रचारबाजिले थप काम गर्न हौसला मिल्छ । म आलोचनालाई उर्जामा बदल्न सक्छु । आजकाल रातमा ६ घण्टा सुतेर बाँकी पालिकाको काममा लाग्थे भने अब मेरो सुताई रातमा ४ घण्टा मात्र हुने छ । म जनताको शासक हैन, सेवक हुँ । आरिस गर्ने जलेरै बस्छन, म जनसेवामा ईमान्दार सिपाहीको भुमिका निर्वाह गरिरहने छु । हाम्रो कृयाशिलताले कसैको राजनैतिक भविश्य समाप्त हुन्छ भने यसलाई हाम्रो दोष मान्न मिल्छ ?
सिभिल ईन्जिनियरिङको कक्षा संचालनमा लागि मुक्लिमा निर्मित भवन
पालिका न्यायीक उजुरीमा जान्छ – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई
गाउँपालिकालाई बद्नाम र अध्यक्षको चरित्र हत्या गर्ने नियतका साथ सामाचारहरु प्रकाशन भएका भन्दै त्यस्तो पितपत्रकारिताका विरुद्धमा न्यायीकमार्ग अवलम्बन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । कर्मचारीतन्त्र पालिकाको सम्बृद्धिको लागि नेतृत्वको नितिलाई अनुसरण गरेर अहोरात्र काममा खटिरहेको भन्दै अधिकृत राईले पालिकाको बदनामी अब सहेर नबस्ने स्पष्ट पारे । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रका नाममा कसैको मानहानी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अधिकृत राईले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी उपचारको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताए ।